Wararka iyo Warbixinada Carewell - Carewell SEIU 503
Maqaalka La Soo Bandhigay
Dheefaha Lacagaha Jaabka Laga Bixiyo ee Ceymiska Ilkaha ee muddada loo kordhiyay sanadka 2022!
Waxaad daryeeshaa dadka kale, aan kuu daryeelno! Guddiga Maamulka wuxuu go'aansaday inuu cusboonaysiiyo dheef muhiim ah sanadka 2022! La Cusbooneeysiiyay: Dheefaha Lacagaha Jaabka Laga Bixiyo ee Ceymiska Ilkaha Is diiwaangeli si aad lacag u baaqsato haddadan haddii...
Wararka iyo Maqaalada Ugu Danbeeyay
Waxaad daryeeshaa dadka kale, aan kuu daryeelno! Guddiga Maamulka wuxuu go'aansaday inuu cusboonaysiiyo dheef muhiim ah sanadka 2022! La Cusbooneeysiiyay: Dheefaha Lacagaha Jaabka Laga Bixiyo ee...
Ma ka heshay ogeysiis Xafiiska Maamulka Dheefaha bishi Agosto 2021 oo ku saabsan Dheefaha PTO oo aan la sheeganin?
Iyada oo la raacayo shuruudaha sharciyeed ee Gobalka Oregon ee la xiriira maalka aan la sheeganin, jeegagga lacagta aan la sheeganin ee dheefaha Wakhtiiga Fasaxa Mushaharka leh ku taariiqaysan Juun...
Barnaamijka Lacag-celinta Lacagaha Jaabka Laga Bixiyo ee Ceymiska Ilkaha ee Ku-meel-gaadhka ah ee 2021-2022
Waxaan ognahay in helidda daryeelka ilkaha ay qaali noqon karto, xittaa iyadda oo ay jiraan ceymiska ilkaha oo wanaagsan sida Kaiser. Sidaas darteed Guddiga Maamulka waxay sameeyeen habeyn dheef ku meel gaar ah si laguugu magdhawo kharashka aad jaabka ka bixiso ee daryeelka ilkaha ee la helay 2021.
Tallaalada COVID-19 ee lagu bixiyo Kaiser Permanente
Shaqaalaha Daryeelka Guriga iyo Taageerada Shaqsiyeed ee leh ceymiska Kaiser Permanente ayaa awoodi karo inay tallaalka COVID ka helaan xarumaha Kaiser.
Hagaha cusub ee Tabbabarka iyo Dheefaha Carewell SEIU 503 ayaa hadda la heli karaa!
Soo Bandhigida Hagaha cusub ee Tabbabarka iyo Dheefaha Carewell SEIU 503! Daryeel bixiyeyaasha ayaa dadaal ku bixyo, maalin kasta, inay taageeraan oo daryeelaan dadka kale. Carewell SEIU 503 waxay...
Warbixinta Waqti Qorista ee Adeeg Bixiyaha
Waqti Qorista Adeeg Bixiyaha: Shaqaalaha Daryeelka Guriga (HCW-yada) iyo shaqaalaha taageerada shaqsiyeed (PCA-yada) waa inay isticmaalaan nidaam elektaroonig ah oo loo yaqaano OR PTC DCI si ay u...